क्यान्सर लगायत यी रोगहरुलाई फाइदा गर्छ भिन्डीले – थाहा पाउनुहोस् । – Yuwa Aawaj
चैत्र १०, २०७७ मंगलबार 683
Prevकोरियाबाट लिएर गएको ६ हजार ५८ डलर एअरपोर्टमा हरायो, प्रहरीको सक्रियतामा फेला पार्न सफल !
Nextयी हुन टमाटर खानुका अचम्मैको १० फाइदाहरु ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव भन्नुहुन्छ : प्रचण्डजीले संरक्षण गरेको चुरे ओलीले समाप्त पार्दैछन् ।
नर्भिकमा उपचाररत अभिनेत्री निशालाई करिष्मा मानन्धरको यति ठूलो सहयोग ।
मनछुने लाईनहरु : मानिसको मेहनत त्यो चाबी हो जसले तक्दीरको ढोका खोलिदिन्छ ।